गगन र नारायणकाजीलाई रवीन्द्रले भने–विवेकशीलमा आएर हातेमालो गर्नुस् - Dna Nepal
गगन र नारायणकाजीलाई रवीन्द्रले भने–विवेकशीलमा आएर हातेमालो गर्नुस्
११ पुष २०७५, बुधबार १७:०५
पोखरा, पुस ११ ।
४ दिनसम्म पोखराको फेवा किनारमा साहित्यको कुम्भमेला नै चल्यो । यहाँ साहित्यमात्रै चलेन, राजनीति, पत्रकारिता, दर्शन र विचारका रोचक र घोचक बहस पनि उत्तिकै भए । धेरै नेता र साहित्यकारहरुले लिटरेचर फेष्टिभललाई आफ्ना विचार राख्ने महत्वपूर्ण फोरमको रुपमा उपभोग गर्छन् । यसपाली पनि भयो त्यही ।
आसालाग्दा र विश्वासिला नेताहरु मेलामा आएर आफ्ना बिचार राखे । साहित्यकारहरुले साहित्यकर्मको ब्याख्या गरे । कलाकारहरुले कलाकारिता प्रदर्शन गरे । केही गीत, केही कविता, केही मुक्तक अनि अरु कुराकानी र बहसहरुले फेवातालको फेष्टिभलको मेहफिल राम्रैसँग जम्यो ।
महोत्सवको अन्तिम दिन थियो, सबैको नजर र प्रतिक्षा थियो एउटा कार्यक्रम । हुन त सबैजसो कार्यक्रममा दर्शकहरु राम्रै थिए । तर अन्तिम दिन मंगलबार भएको ‘अबको नेतृत्व–कस्तो र कसको ?’ शीर्षकमा भएको बहस सबैको आसलाग्दो र रोचक बन्यो । बहसमा थिए नेपालका चर्चित राजनीतिज्ञहरु नेकपाका प्रबक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ, काँग्रेस नेता गगनकुमार थापा र विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक रवीन्द्र मिश्र । उनीहरुको मियो बनेर पत्रकार गुणराज लुईंटेलले प्रश्नको मदानी डुलाईरहेका थिए ।
केहीबेर बिचार मोथियो । तीन धारका तीन नेताहरु एउटै मञ्चबाट आफ्ना जिकीर पोख्न थाले । अन्तिममा बिचार मोथियो र निष्कर्ष निस्कियो, अवको राजनीति सङलिनुपर्छ । त्यसमा तीनैजना सहमत थिए । प्रश्तुत छ सोही कुराकानीको सम्पादित अंश–
छलफलको सुरुवातमै पत्रकार लुइँटेलले नेता भनेको के हो भनेर तीनै जनालाई प्रश्न सोधे । जवाफमा नेकपा प्रवक्ता श्रेष्ठको उत्तर थियो, ‘नेता भनेको आफ्नो समाजलाई सत्यको वरिपरि ल्याउँदै समाजको रुपान्तरणको लागि अगुवाको भूमिका खेल्ने विचार, व्यक्ति र प्रवृत्ति नै नेता हो ।’
कांग्रेस नेता थापाले भने–‘राजनीतिकर्मीको सम्बन्धमा नेता भनेको हो भने चाहिँ जसले प्रश्न गर्न सक्ने सामर्थ्य राख्छ, जो बनिबनाउ उत्तरको पछि लाग्दैन, जसले समस्याको समाधानका लागि हल गर्ने उपाय खोज्छ र निरन्तर प्रश्न गरिरहन्छ त्यही नेता हो ।’
नारायणकाजी श्रेष्ठ आफ्नो पार्टीमा पनि समयपालक र फरक विचार राख्ने नेताका रुपमा पर्नुहुन्छ भन्दै पार्टीभित्र उहाँले पालना गरेजस्तै व्यवहार छ कि छैन भन्ने प्रश्नमा श्रेष्ठले भने–‘मैले समयको बारेमा प्रष्टसँगै भन्दै आएको छु । हाम्रो समाज, राजनीतिक पार्टी सबैतिर समयको पालना नगर्ने परिपाटी छ । उल्टो हामीले आफैले ढिलो गर्ने र नेपाली समय त हो नि भन्दै नेपाललाई अपमानित गर्ने परिपाटी छ । यसलाई परिवर्तन नगर्ने हो भने हामीले अरु कुरामा पनि परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ भन्ने मेरो विश्वास हो । त्यसैले मैले यही कार्यक्रम पनि पहिले सेट गरेको समयभन्दा अलि पर जान लागेको देखेर मैले गुणराजजीसँग भनेको थिएँ, तपाईँ ख्याल गर्नुहोस् ।
थापाले भने–‘नेपाली कांग्रेस पार्टीभित्र नेतृत्वमा हस्तक्षेप पनि गर्ने, नेतृत्व बदलिने र हामी नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा पुग्ने कुरा अवश्यमभावी छ । तर त्यो भएर के हुन्छ ? हामीले एउटा कोणबाट हाम्रो नेतृत्वको दावी गर्यौँ । तर भएपछि के हुन्छ वा केका निम्ति भन्ने प्रश्नको उत्तर खोजेनौँ भने त्यो यात्रा निरथर्क हुन्छ । नेपालमा हाम्रा नेताहरु कुनै पनि संस्था र संस्थापनका विरुद्ध लड्नुभयो । लड्दाखेरी नेताका जीवनशैली समाजका लागि नैतिकताको उच्च मापदण्ड र मानक बन्यो ।’
‘जे आँट्नुभयो त्यही पूरा गर्नुभयो । तर त्यही व्यक्ति परिवर्तनपछि नैतिकताको सार्वजनिक कसीमा निम्छरो देखिए । जे गर्छु भनेर आए, त्यो गर्नै सकेनन् । यो एक जना व्यक्तिको मात्रै कुरा होइन, आम नेपाली नेताका कुरा हो । हामी कोही पनि यसबाट अछुतो छैनौँ । भोलि हामी पनि त्यहाँ पुगेपछि त्यही हुन्छ कि भन्ने हो । हाम्रो राजनीतिमा आम प्रवृत्ति नै त्यस्तो छ ।’
‘अहिलेकै सरकारको कुरा गरौँ न । यो सरकार सरकारमा आउँदै गर्दा के भनेर आयो ? हामीले जितेनौँ भने अर्को पार्टी भनेको नेपाली कांग्रेस हो । त्यो पार्टीले जित्यो भने देशै बेच्दिन्छ भनेर यो पार्टी नागरिकलाई डर देखाएर आयो । मान्छेलाई तर्सायो । भैली गाएर आयो । डर बेचेर आयो । हामीले पनि अहिले त्यही गरेका छौँ ।’
‘यो यस्तो सरकार हो यो पाँच वर्ष सत्तामा बस्यो भने अधिनायकवाद आइहाल्छ भनेर अरुलाई तर्साइरहेका छौँ । हामी अर्को डर बेचिरहेका छौँ । त्यस्तै रवीन्द्र दाइहरु हामी दुई दललाई देखाएर के भन्नुहुन्छ, यिनीहरुले चलाए भने त बर्बाद हुन्छ, देशै सकिन्छ । अर्कोले अर्को डर बेच्यो । हामी सबै केवल डरको खेती गरिरहेका छौँ । हामी अर्को आयो भने के हुन्छ भन्दै डर बेचिरहेका छौँ । हामी पार्टी्भित्र पनि त्यस्तै बुढाहरुले पार्टीलाई बर्बाद गर्छन् भन्दै डर बेचिरहेका छौँ । हामी यो भएन वा त्यो भएन त भन्यौँ । तर हामी त्यहाँ भयौँ भने के हुन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ दिन सकेनौँ । हामीले त धकेलेरै भए पनि नेतृत्वमा जाने कुरा गरेकै छौँ ।’
रवीन्द्र मिश्र–गगनजीले दुइटा महत्वपूर्ण कुरा उठाउनुभयो । नेतृत्वमा पुगेर के हुन्छ हामी हस्तक्षेप गर्न तयार छौँ । हामी नेतृत्व लिन तयार छौँ भन्नुभयो । आधारभूत कुरा त पार्टीहरुको संरचनागत समस्या हो । त्यसैले हाम्रा पार्टीका नेता सूर्यराज आचार्य प्रतिकात्मक रुपमा भन्नुहुन्छ, एउटा प्वालबाट गौतम बुद्ध हाले पनि अर्को प्वालबाट निस्कने बेलामा चार्ल्स शोभराज भएर निस्कन्छ ।
तपाईँहरुलाई एउटा कुरा भन्छु । तपाईँहरुले देश बदल्छु भनेर ठूलाठूला कुरा गर्नै पर्दैन । गर्न सकिने चार पाँचवटा कुरा मात्रै गरे पुग्छ । तपाईँहरुले गएर नेतृत्वलाई भन्दिनुस, दलीय पेशागत संगठन हामीलाई चाहिँदैन भन्दिनुस् । सक्नुहुन्छ ? संसारमा एउटा सरकारी कार्यालयमा ६ वटा राजनीतिक दलको झण्डा राखेर कुन चाहिँ देशले प्रगति गरेको छ मलाई भन्दिनुस् । यदि देश बनाउने हो भने तपाईँहरु गएर भन्नुस्, हामीलाई प्राध्यापकबाट राजनीति गराउनु छैन ।
तपाईँहरु गएर भन्नुस, वकील, इञ्जिनियर, डाक्टर र विद्यार्थीलाई राजनीति गराउनु छैन । कलेजको परिधिभित्र राजनीति गराउनु छैन । त्यति भन्नेबित्तिकै न्यायालयमा भएको अन्याय, कर्मचारीतन्त्रमा भएको बेथिति त्यसै अन्त्य हुन्छ । सरकारले काम गर्न थाल्छ, डर बेच्न पर्दैन । त्यसै कारणले गर्दा पार्टीको संरचनामा परिवतर्न गर्नुपर्यो ।
म बिन्ती गर्छु, तपाईँहरु गएर भन्दिनुस्, हामी सानै दल भएर बसौँला बरु । तपाईँहरु नै ठूलो दल भएर देश बनाउनुहोला । तर गएर भन्ने आँट छ, तपाईँहरु झुटो पेट्रोल पिएर धनी नबन्नुस् । भन्नुस् घरभाडाको पैसा नखानुस् । तपाईँहरुको नेतालाई गएर भन्नुस, २४ जना मन्त्रीमध्ये २३ जनाले झुट बोलेर कसरी बसे ? मलाई तपाईँहरुबाट धेरै आशा छ, तर यति गर्न सक्नुभएन भने तपाईँहरुले यस्तो घर वा दाप बनाउनुभएको छ नि त्यहाँबाट निस्कँदा खिया नै लागेर निस्कनुहुन्छ ।
नारायणकाजी श्रेष्ठ–हामीले नेतृत्वको कुरालाई यान्त्रिक ढंगले हेर्नु हुँदैन । हामी कहिले नेतृत्वमा पुग्छौँ भनेर मात्रै हुँदैन । हामी राजनीतिमा किन छौँ भन्ने कुरा पनि हो । मेरो सन्दर्भमा भन्ने हो भने म एउटा मुक्तियात्रामा छु । मेरो मुक्तियात्राको एउटा अभिन्न अंग राजनीति पनि हो । त्यसकारणले म राजनीतिमा छु ।
गगन थापा–हामीले अहिले हाम्रा नेताहरु भ्रष्ट भए, ठिक भएनन् भनिरहेका छौँ । उनीहरु एउटा यस्तै व्यवस्था परिवर्तनका लागि लडेका थिए । व्यवस्था परिवर्तनपछि उनीहरु फेरि त्यस्तै किन भए ? अब्राहम लिंकनले भनेजस्तै कष्ट दुःख त सबैले सहन सक्छन् ।
नाराणकाजी सरले भनेजस्तै नेपालका पार्टीहरुमा भ्रष्टाचार संस्थागत छ । पार्टीको सदस्यताको पद्दतिले गर्दा छ । जबसम्म पार्टी खुला सदस्यमा जान सक्दैन, लाखौँ नेपाली कांग्रेसका मानिसहरुको मतदानबाट कांग्रेसको सभापति चुनिने परिपाटी नभएसम्म पार्टी्भित्र सानो समूहको बन्धक बन्ने खतरा कायम रहन्छ ।
रवीन्द्र मिश्र–नारायणकाजीजी बोल्दा त मलाई विवेकशीलकै नेता बोलेजस्तो लाग्यो । इमान्दारिता, संस्था र व्यक्तिका कुरा त हामीले बारम्बार रटिरहेका छौँ । त्यही कुरा बोलिदिँदा उहाँलाई धन्यवाद । उहाँले भन्नु त भयो तर पार्टीमा गराउनु भएको भएन भन्ने कुरा चाहिँ महत्वपूर्ण हो ।
त्यो संरचनालाई इमान्दार र पारदर्शी बनाउनुपर्यो । त्यो संरचनामा आफन्तलाई भन्दा पनि क्षमतावान मान्छेहरु ल्याएर राज्य संयन्त्र चलाउनुपर्यो । संरचना सुधार्नुस, त्यसपछि एउटा प्वालबाट पस्दा गगन थापा भएर पस्नुहुन्छ र निस्किँदा पनि गगन थापा नै भएर निस्किनुुहुन्छ । शेरबहादुर भएर होईन ।
‘रवीन्द्रजीले पार्टीको घोषणापत्रको व्याख्या राम्रोसँग गर्नुभयो’
बहसको अन्त्यमा विवेकशील साझा पार्टीका संयोजकले गगन थापा र नारायणकाजी श्रेष्ठलाई असल व्यक्ति भएको भन्दै असल व्यक्ति खराब घरमा भएको भन्दै विवेकशीलमा आएर हातेमालो गर्न आग्रह गरे । बहसमा अबको नेतृत्व कस्तो र कसको भन्ने कुराको निचोड ननिस्किए पनि नेपाली राजनीतिक वृत्तमा भने एउटा बहस सिर्जना भएको छ । नेपाली राजनीतिक नेतृत्वको मात्रै कुरा होइन, राजनीतिक पार्टी र उनीहरुको संस्थागत संरचना कस्तो हुनुपर्ने भन्ने कुरा पनि बहसमा आएको छ ।